Maayaa Muur nama akka mana hidhaatii ba’uuf qabsaa’aaf turte Jonaataan Ayiransitti heerumte – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Maayaa Muur nama akka mana hidhaatii ba’uuf qabsaa’aaf turte Jonaataan Ayiransitti heerumte
On Sep 17, 2020 83
Finfinnee, Fulbaana 7, 2013 (FBC) – Kubbaa kachoon addunyaarratti beekamtuu kan taateefi garee WNBA keessa taphachaa kan turte Maayaa Muur nama akka mana hidhaatii ba’uuf qabsaa’aaf turte Jonaataan Ayiransitti heerumte.
Jonaataan Ayiransi himannaa sobaa mana cabsee seenuun yakka raawwachu jedhuun
dogogoraan mana hidhaa ture.
Ayirasni erga dogoggoraan waggaa 23 hidhamee booda Bitootessa keessa erga bilisa jedhamee gadhiifameera.
Muura nama kana hidhaatii baasuuf qalbii guutuudhaan carraaquuf jecha bara Faranjootaa 2019 keessa tapha ittiin gurra horatte dhiistee garee ishee WNBA keessaa baate.
Dhamaatiin isheen hojii ishee itti haarsaa gootes lafatti hin hafne; Jonaataan Ayiransitti mana hidhaatii gadhiifame.
“Ji’oota lama dura walfuune, nuti amma jireenya boqonnaa haaraa kana waliin gammachuudhaan itti fufaa jirra,” jechuun dubartii ganna 31 Muur Gud Moorniing Ameerikaatti dubbatteetti.
Muur bara Faranjootaa 2011 keessa garee Minesootaa Lynx irraa erga filamtee booda, akka isaan marsaa afuriif shaampiyoonaa ta’an gargaaruun bara Faranjootaa 2014 keessa taphattuu hedduu jaallatamtuu (Most Valuable Player (MVP) jedhamteetti.
Muur seenaa WNBA keessatti taphatoota maqaa gaarii hortan keessaa ishee ol-aantuudha.
Muur tapha Olompikii lamaafi tapha Shaampiyoonaa Addunyaa lamaan medaaliyaa warqee argatteettis.
Haata’uti, dirree ispoortii akkasi itti milkoofteefi maqaa gaarii horatte keessaa bara Faranjootaa 2019 gara jalqabaa keessaa baateetti.
Kan kana gochuuf murteessites Jonaataan Ayiransi kan waggoota 12 durarraa kaastee beektu mana hidhaatii baasuuf qabsaa’uudhaaf.
Jonaataan Ayiransi hidhaa waggaa 50n adabamee ture.
Barsiisaan boo’u lammiin Jaappaan boo’uun dhiphuu hir’isuuf faayiddaa akka qabu ibsa
Saroonni vaayrasii koroonaa fuunfatanii adda baasuu akka danda’u jedhame
Lammiin Chaayinaa tamsaasa kallattirratti abiddaan gubattee duute
Chaayinaatti sammuu ga’eetti tokko keessaatti lilmoowwan dheerina seentii meetira 5…
Guyyaan simannaa eebbifamtoota yuunvarsiitiiwwan mootummaa…
Bakka buutoota naannoo Tigraay walga’iirratti hin…
Dr Abiy maallaqni Maaddii Biyyaaf sassaabmu akkaataa…
Ministeerri Maallaqaa hojmaata baajatni dabalataa aanaalee…
Barsiisaan boo’u lammiin Jaappaan boo’uun dhiphuu hir’isuuf…
Saroonni vaayrasii koroonaa fuunfatanii adda baasuu akka…
Lammiin Chaayinaa tamsaasa kallattirratti abiddaan gubattee…
Oduu biyya keessaa3381